Cameroon: Arrinta Ernest Obama, tifatiraha tifatirka ee Haman Mana - teles relay
Cameroon: Ernest Obama Affair, tifatiraha satirical ee Haman Mana
DADKA & LIFESTYLECADDAALADDACOMPANY
By Chinde Last updated Juun 27, 2020
Xariga wariye Ernest Obama ayaa wali laga sii hadlayaa. Ilaa iyo Juun 18, oo ah maalintii la qabtay, kiiska ayaa abaabulay gabi ahaanba wararka. Ragga warbaahinta waa cadhoon. Tani waa kiiskii tifaftiraha maalinlaha ahaa ee Le Jour, kaasoo qoraalkiisa tifaftiraha ka go'ay Juun 22, isagoo dhalleeceeyay sida loola dhaqmayo Ernest Obama.
Tafatiradiisa Isniinta, Haman Mana canaanan kuwan "Garsoorayaasha ka qaybqaata ololahan culus", iyo suxufiyiin u shaqeeya L'Anecdote Group oo Qalinkooda ug soo celi wasakhdan ".
teles relay.com ayaa heshay tifaftirahaan oo ku siinaya adiga…
Waqtigii siccarios [ቀናqaade kaasoo diley qoraha Tifaftirayaasha]. Maalintii kale, maamule wuxuu ka shakiyay mid ka mid ah shaqaalahiisa inuu ka qaatay xoogaa lacag ah ama uu ku labanlaabay dhowr dharbaaxo, wuxuu go’aansaday inuu ciqaabo. Wuxuu cod dheer ku soo degay xafiiska, qiyaastii labaatan gendarmes, oo hubaysan sidii ay u heli lahaayeen kuwa ugu nugul argagixisada.
Ayaa si xun u qabsaday shaqaalihii la tuhunsanaa oo bilaabay, isaga oo aan ku ceebeyn isaga hortiisa asxaabtiisa iyo wax walba, isaga oo ka duubaya filimka, goobta. Waxaa soo baxday in shirkadani tahay telefishan telefishan, in shaqaalahani uu yahay suxufi, isla markaana madaxani uu yahay ganacsade maal badan…
Filimka xarigga ayaa ka soo muuqday waqti firaaqi ah wargeyskii fiidnimada, isagoo "warbixinno" ka dhan ah saaxiibkiis iyo ammaanta maamulaha. Waxay la socotaa xilliyada, shabakadaha bulshada ayaa gubay, gaar ahaan kuwa loogu talagalay, "si wanaagsan ayey wax ugu qabteen" saxafigan, iyadoo la tixgelinayo dariiqkiisa gaarka ah - waa wax aan la fahmi karin - in lagu dhaqmo shaqo…
Dhibaatada ma jiraan. Waxa ku habboon xaaladdan waa adeegsiga bilayska iyo hay'adaha jamhuuriyadda si ay u xalliyaan arrin gaar ah, oo ka baxsan sharciga. Xubnaha ciidammada amniga ee iskood isku amaahday ayaa nijaaseeyay labiskii ciidammada Qalabka Sida ee Cameroon. Maaha gendarmes, iyagu waa siccarios.
Garsoorayaasha kaqeybqaato shirqoolkan culus waa been abuur. Saxafiyiintii qalin u soo diray wasaqdaani waxay lumiyeen sharaftii xirfadeed oo dhan. Indhaha kuwa isku fac ah iyo dadweynaha.
Kuwa kale, kuwa ku dhawaaqay fowdada waxay u arkaan aragooda hortiisa: la haystayaasha ciidamada amniga iyo xarumaha jamhuuriyada kooxaha tuulooyinka. Cabsidu miyuu xasaasi u noqday ilaa waqtigii la rakibiyey torpor? Wali wadankeena waxaa jooga dad macquul ah, oo awood u leh inay dhahaan joojintan. Faahfaahinta noocan ah ayaa ah in masiirka ummada mararka qaar laga ciyaaro.
isha: https: //www.lebledparle.com/fr/societe/1113961-affaire-ernest-obama-l-edel-saxaafadeed-satirique-d-haman-mana
3 talo oo sida ugu wanaagsan loogu maareeyo miisaaniyadaada
Cameroon: Ka dib markii Cabral Libii, saxafiga Guibai Gatama uu bilaabay "10 milyan oo dadka Northerners Movement"